Website ဆိုတာ စာမျက်နှာများတိုင်းကောင်းလား - Blog
Home /Website ဆိုတာ စာမျက်နှာများတိုင်းကောင်းလား
LanguageJune 19, 2018
ကျွန်တော်လည်း Website ရှိတာပဲ.. အခုခေတ်လူတော်တော်များများလည်း website ရှိတာပဲ.. ဒါဆိုရင် Website မှာ စာဆိုတာမျိုးက များများထည့်မှကောင်းတာပေါ့.. သေချာလား.. စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်…
Website တစ်ခုဆိုတာ လူတိုင်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့တဲ့နေရာတစ်ခုပါ.. အရာအားလုံးထက်အားသာချက်တစ်ခုက အချိန်မရွေးဝင်ကြည့်နိုင်သလို ဝင်ကြည့်တဲ့သူဘက်က တစ်ဘက်ကို သူဘယ်သူပါဆိုတာကို ရုပ်လုံးမပြပဲ အေးဆေးသက်သာဝင်ကြည့်သွားတာပါ။
ပုံမှန်နည်းနဲ့ ဝဘ်ဆိုက်နဲ့ဘာကွာလဲဆို ထိုင်ရာမထ အေးဆေးသွားကြည့်ပြီး ငမ်းနိုင်ပါတယ် (မယုံမရှိပါနဲ့ .. ကျွန်တော်လည်း အဲဒါမျိုးလုပ်ပါတယ်) ဆိုင်ရှင်ကိုလည်း ဂရုစိုက်စရာမလိုသလို ဘယ်သူမှ ဘယ်လိုထင်မှာကိုမစိုးရိမ်ရပါဘူး. အေးဆေးပါပဲ..
ဆိုက်ရှင်ဘက်က ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ဆိုင်ဖွင့်ထားစရာသိပ်မလို လုပ်ငန်းကို ငမ်းမယ့်သူတွေက အပေါ်မှာပဲ အေးဆေး စိတ်ကြိုက်ငမ်းနိုင်ပြီး တကယ်ဝယ်မဲ့သူတွေပဲ ဆိုင်ကိုလာတော့တယ်လေ။ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်တုန်း…
အဲဒီမှာ လူတွေက ဆိုက်ပေါ်မှာ ငမ်းကောင်းအောင် တင်ချင်တာတွေတင်လည်း တင်လိုက်ကို အကျိုးနည်းတွေကိုဖြစ်ကုန်တော့တာပဲ.. ပြောပြမယ်။
ပင်မစာမျက်နှာဆိုတာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအကြောင်းကို အဓိကပြောပြီးနောက်ဆုံးထုတ်ကုန် (ဝါ) အဓိက ရောင်းချင်တဲ့ထုတ်ကုန်ကို တင်ပေးရမယ့်နေရာ.. ဘယ်နှယ့် လုပ်ငန်းကိုပြတာကနည်းနည်း… လူကြည့်များအောင်ဆိုပြီးတော့ အကုန်လုံးကို တင်ပြတော့တာ.. လုပ်ငန်းက ဘာလုပ်မှန်းလည်းမသိဘူး.. ဘာဖြစ်မယ်မှန်းလည်းမသိဘူး.. ဘာလုပ်ရမှာလည်းမသိဘူး.. အကုန်လုံးတစ်မျက်နှာတည်းမှာ စုံစိနဖာတင်ထားလိုက်တော့ကာ.. အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာ ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ နဖာကလော် ထိုင်ရောင်းနေသလိုဖြစ်သွားတာပဲ..
ဆိုက်မှာ bounce rate ဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒါကနည်းလေကောင်းလေ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က အကုန်ပြပြီး အကုန်ရောင်းချင်တာဆိုတော့ ဘာလာလာ ဒေါင်းတယ်လေ။ ဆိုက်မှာ ရောင်းချင်တာတွေကလည်းများ ဘာထည့်ရမှန်းမသိတော့ ဝယ်ရမယ့်သူကလည်း ဘာဝယ်လိုက်ရမှန်းကို မသိတော့တာ.. အဲဒီမှာ ရွာလည်တာပဲ.. bounce rate တွေ မတော်မတရားတက်လာပြီးတော့ ဆိုက်က လူမဝင်တော့ဘူး။
နောက်တစ်ချက် မေ့နေနိုင်တာက ဆိုက်တိုင်းမှာ ဦးတည်ချက်ရှိတာပဲ.. ဆိုင်တိုင်းမှာလည်း ဦးတည်ချက်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ – City Mart မှာ Drill Machine မရနိုင်သလို.. Pro 1 မှာလည်း ကန်စွန်းရွက်မရနိုင်ဘူး။ အစုံရောင်းတိုင်း နယ်ပယ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မရောင်းခင် ကြိုစဉ်းစားပါ။ အကုန်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာကို လူတိုင်းမယုံနိုင်ဘူးနော်.. Walmart နဲ့ amazon မှာတောင် Aliexpress က ပစ္စည်းမျိုးမရနိုင်တာကို သတိထားကြည့်ပါ။
ဆို်က်မှာ ပြွတ်မနေအောင်ခွဲထားလိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်မှန်းမသိတော့ဘူး။
ဆိုက်ကိုတော့ ပြွတ်မနေအောင်ခွဲထားလိုက်တယ်။ တစ်မျက်နှာနဲ့နောက်တစ်ခုနဲ့က အဆက်အစပ်ကို မရှိတော့ဘူး။ အဲဒါမျိုးလည်း ကြုံဘူးပါတယ်။ ဆိုက်မှာ ကိုယ်လိုချင်တာ သိပ်များသွားတဲ့အခါမှာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ပဲ အဆက်အစပ်မမိတော့တာမျိုးပေါ့.. ရှောင်နိုင်လေကောင်းလေပါ။
ရောင်းချင်တယ်. Product information မပါလာဘူး။
ကျွန်တော်တို့တောင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရောင်းတာက ရောင်းချင်တယ်။ product ဘာမှန်းလည်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုရောင်းတယ်။ ဘယ်လိုဝယ်ရတယ်။ ဘာဖြစ်ရင် ဘာလုပ်ဆိုတာ ပါမလာတော့ဘူး.. မှတ်ကရော.. ဘာမှမပါပဲရောင်းရင် ကြည့်တဲ့သူက ဘာကြည့်ရမှာတုန်း.. စဉ်းစားပြီးမှ လုပ်ကြပါ။
အဆိုးဆုံးပါ။ ဘာတွေရေးထားမှန်းကို မသိတာ.. လုပ်ငန်းနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲ ရေးထားတာ.. လုပ်ငန်းဉီးတည်ချက်တို့ ဘာတို့ရေးထားတာက လိုအပ်ပေမယ့် ဘာမှမလိုအပ်ပဲ လာကြည့်တဲ့သူတွေကို နေကောင်းလားတို့ ဘာတို့ မလိုဘူးလေ.. ရေးချင်ရင် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ရေးပါ. ကိုယ့် main identity ဖြစ်တဲ့ ဆိုက်မှာတော့ လာမရေးကြပါနဲ့နော်.. တောင်းပန်ပါတယ်. ရှိကြီးခိုးပါရဲ့..